सकारात्मक विभेद उपयोगी प्रश्नोत्तर | Arjun Bhandari Free songs
Home / लोकसेवा दिग्दर्शन / सकारात्मक विभेद उपयोगी प्रश्नोत्तर
सकारात्मक विभेद उपयोगी प्रश्नोत्तर
Posted by: Arjun Bhandari in लोकसेवा दिग्दर्शन August 7, 2014	0 1772 Views
१ सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) भन्नाले के वुझ्नुहुन्छ ? लेख्नुहोस ।
समाजमा कुनै वस्तु साधन वा अवसर वाड्नु भन्दा अघि त्याहाँ असमानता छ भने समान रुपमा वाडिएको वस्तुमा पनि असमान हुन्छ र असमानताको विस्तार झनै विस्तार हुन्छ र अर्को शव्दमा असमानताका कारण सिमान्तकृत भएका स्रोत साधन र अवसरवाट पाखा लागेका वर्गलाई विशेष व्यवहार मार्फत सुविधा उपलव्ध गराउन न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले सकारात्मक विभेदको अवधारणा आएको हो । भारतीय प्रशासनविद सीताराम महेश्वरीका अनुसार विगतको भेदभावपूर्ण व्यवहारको असर हटाउन लिइएको नीति तथा प्रयास नै सकारात्मक विभेद हो ।
यसले दुई समान योग्यता भएका मानिसलाई रोजगारी आवेदन गरेमा वा यस्तै अवसर दिनुपर्दा महिला र अल्पसंख्यकलाई सहानुभुती राखी प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर यसवाट Reserve Discrimination हुनुहुदैन भन्ने मान्यता राख्छ ।
अर्को अर्थमा सकारात्मक कार्य सार्वजनिक नीति र प्रयासहरुको त्यस्तो संरचना हो, जसले सामाजिक विभेदका सन्दर्भमा रहेको जाती धर्म लिगं र जातीय उत्पत्ती (National Origin) को विभेदलाई हटाउने प्रयास गर्दछ ।
सकारात्मक विभेदको प्रयास सर्वप्रथम अमेरिकामा गरिएको हो ।
सन् १९४१ मा रुजवेल्टको राष्ट्पतीय कालमा जातीय विभेदको अन्त्य गर्न काला जाती पनि सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सैदान्तिक रुपमा कोटा प्रणाली, आरक्षण, कमयोग्य प्राथमिकता जस्ता कार्यलाई सकारात्मक विभेदले विचार गर्दैन । Benefit ले Side Effect पार्नु हुदैन भन्ने धारणा रहेको छ ।
असमान समाजमा वाडिने चिजलाई वरावरी वाडेर मात्र पुग्दैन सवैं मानिसमा लगभग वरावरी परोस भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यो नै सकारात्मक विभेद हो ।
२.सकारात्मक विभेदको रुप बारेमा लेख्नुहोस ।
सकारात्मक विभेद समावेशीकरणको औजार हो । विभिन्न मुलुकले आफ्नो सन्दर्भ र चाहना अनुरुप यसलाई अपनाउने गरेका छन् । जुन निम्नानुसार छ ।
विशेष तालिम व्यवस्था
लैगिंक न्यायको निर्माण
३. सकारात्मक विभेदको उद्धेश्य लेख्नुहोस ।
समावेशी प्रजातन्त्रको धारणालाई साकार गराउने
सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने
अन्तर समुहगत द्धन्दलाई नियन्त्रण गर्ने
पिछडिएका वर्गहरुलाई समान अवसर प्रदान गर्ने
राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने
समतामुलक समाजको स्थापना गर्ने
सवैं वर्ग जातजाती समुदायका नागरिकहरुलाई मुलप्रवाहमा समेट्ने ।
विद्यमान लैगिंक जातीय दुरी तथा भेदभावको अन्त्य गर्ने
४. सकारात्मक विभेदका क्षेत्रहरु लेख्नुहोस ।
प्रशासनिक रोजगारीका क्षेत्र
नीति निर्माणका क्षेत्र
गैर सरकारी क्षेत्र । निजी क्षेत्र
५. सकारात्मक विभेदका सिद्धान्तहरु लेख्नुहोस ।
क्षतीपुर्तिको सिद्धान्त : कुनै पनि वर्ग वा व्यक्ति योग्य हुनुको कारण उसको विशेष नैसर्गिक गुण भएको कारणले होईन कि उसले सयौ वर्ष सम्म भौतिक र सांस्कृतिक वचत प्रयोग गर्नाले हो । ती वर्गले शोषित उत्पिडित र सिमान्तकृत वर्गलाई केही समयसम्म क्षतीपुर्ति दिने अवसर त्याग गर्नुपर्छ ।
संरक्षणवादी सिद्धान्त : कमजोर र शक्तिहिन वर्गहरुको संरक्षण गर्नु
समानुपातिकको सिद्धान्त : राज्यका स्रोत साधन र अवसरहरु समान रुपले समानुपातिक वितरण गरिनुपर्छ ।
सामाजिक न्यायको सिद्धान्त : राज्यका सवैं अवसरहरु समान रुपले सीमान्तकृत वर्ग सम्म पुग्नुपर्छ ।
६. नेपालमा सकारात्मक विभेद बारेमा भएको व्यवस्था बारेमा लेख्नुहोस ।
वि.सं.२०४७ सालको संविधानले कमजोर वर्गको हित संरक्षणका लागी कानुनद्धारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएता पनि कार्यान्वयनमा कार्यसुचीमा प्रवेश पाउन नसकेको ।
वि.सं.२०५६ मा तत्कालिन सरकारले शासकिय सुधार कार्यक्रमको मार्गचित्रमा निजामती सेवामा महिला, जनजाती दलित, आदीको प्रतिनिधित्व वढाउनु सकारात्मक कार्यनीति लिने घोषणा ।
२०६० सालमा तत्कालिन सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा आरक्षण व्यवस्था सम्वन्धी सुझाव समितिको गठन गरियो ।
पुनस्थापित प्रतिनिधी सभाले महिलाको हिस्सा ३३ प्रतिशत पुर्याउने एकमतले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा सकारात्मक विभेद सम्वन्धमा व्यवस्था गरेको ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको ।
नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनामा खुला पदपुर्ति गर्दा २० प्रतिशत महिलाका लागी आरक्षित गरेको ।
आ.व.०६४।०६५ देखि लैगिंक वजेटको अवधारणाको विकास भएको
विभिन्न ५७ भन्दा वढी कानुनमा १५० भन्दा वढी विषयमा महिलाका लागी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
७. सकारात्मक विभेदका उपलव्धीहरु लेख्नुहोस ।
समावेशीकरणको कारणले गर्दा राज्यका विभिन्न क्रियाकलापहरुमा लक्षित वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व वढेको छ । हाल प्रशासनमा महिलाको सहभागिता १२.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
निजामती सेवालाई पूर्ण समावेशी वनाइएको छ ।
राजनैतिक क्षेत्रमा महिला तथा जनजाती लगायत अन्य वर्ग समुदायका नागरिकहरुलाई उल्लेख्य सहभागि वनाइएको छ । संविधानसभामा झण्डै ३३ प्रतिशत सभासद(१९७) जना महिला रहेका छन् भने दलितको संख्या पनि उल्लेख्य उपस्थिती छ ।
प्रत्येक विद्यालयहरुमा महिला शिक्षिकाको वढ्दो अनुपात रहेको छ ।
सिमान्तकृत वर्गहरु राज्यका पिछडिएका वर्गहरुको मनोवल वढेको छ ।
राज्यका हरेक क्रियाकलापहरुमा समावेशी वनाउने प्रयास गरेको पाईन्छ ।
८. सकारात्मक विभेदका कमजोर पक्षहरु लेख्नुहोस ।
आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडी पारिएका भनिएको छ सो कसरी पहिचान गर्ने ?
विशेष सुविधा कति तह सम्म पुर्याउने ? एक, दुई……स्पष्ट छैन
लक्षित वर्ग समुदाय (Target Group) ले नपाई समाजका वाँठाटाठाँले पाउने सम्भावना वढी रहन्छ ।
कानुन विभेदकारी हुनुहुदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ, तर सकारात्मक विभेदले त्यसलाई ओगटदैन
योग्यता प्रणाली पलायन हुन सक्छ ।
सामाजिक सहभाव (Social Harmony) पनि विथोलिन सक्छ । जस्तो भारतको आत्मदाह, श्रीलंकामा तमिलको पृथकतावादी आन्दोलन ।
एक पटक आरक्षण पाईसकेपछि सधै आरक्षण हुने मनस्थिती रहन्छ
यो योग्यता प्रणालीको चुनौती हो ।
९. सकारात्मक विभेदमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु लेख्नुहोस ।
यो अस्थायी समाधान हो । यो अवस्था हटेपछि यसको Sustainability वनाउनु पर्छ ।
कुनै समुदाय वा जातीको वर्चस्व कायम हुन सक्छ ।
योग्यता प्रणालीलाई पनि आघात पुग्ने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ
आरक्षणवाट निजामती सेवाको प्रभावकारीता घट्नुहुदैन
सामाजिक सहिष्णुता विग्रन सक्छ ।
खास वर्गलाई मात्र प्रणालीमा पहुच पु्याउनुपर्छ ।
आरक्षण मात्र होईन उनीहरुको क्षमता विकास र सशक्तीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ
Previous: सार्वजनिक प्रशासन र यसको अरु विधासंग सम्वन्ध
Next: नेपालको प्रशासनयन्त्रमा स्वयंसेवक परिचालन